အီတလီမော်ဒယ်ချီယာရာနာစတီနှင့်ချစ်ခွင့်ရရေးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေမာ – Play Maker Sports Journal
နေမာဟာမကြာသေးမီတုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအီမီလီယာမာနက်စ်နှင့်အပြန်အလှန်Like လုပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးနောက်ချစ်ကြိုက်နေကြကြောင်းသတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နေပယ်သူအီတလီမော်ဒယ်ဟာအင်စတာဂရမ်မှာ Followers ၁.၇သန်းကျော်ရှိပြီး အီတလီမှနာမည်ကျော် အစီအစဉ်များဖြစ်တဲ့ Dance. Dance. Dance နှင့် The Island of the Famous တို့မှာပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါ့အပြင် နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်တဲ့ Armani ၊ Trussardi တို့နှင့်လည်း အလုပ်လုပ်ခဲ့သူပါ။
ေနမာဟာမၾကာေသးမီတုန္းကဆိုရွယ္မီဒီယာမွာအီမီလီယာမာနက္စ္ႏွင့္အျပန္အလွန္Like လုပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကေၾကာင္းသတင္းထြက္ခဲ့ပါေသးတယ္။
ေနပယ္သူအီတလီေမာ္ဒယ္ဟာအင္စတာဂရမ္မွာ Followers ၁.၇သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အီတလီမွနာမည္ေက်ာ္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္တဲ့ Dance. Dance. Dance ႏွင့္ The Island of the Famous တို႔မွာပါဝင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ဒါ့အျပင္ နာမည္ေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္တဲ့ Armani ၊ Trussardi တို႔ႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ခဲ့သူပါ။
ရည်းစားဟောင်းသေဆုံးမှုကြောင့်ယနေ့ညဖီဖာကမ္ဘာ့ကလပ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် ဘိုင်ယန်စတားဘိုတန်း ပါဝင်မည်မဟုတ်